Macroeconomics | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
inona no tsy itovizan'ny foto-kevitra "enti-manana" amin'ny foto-kevitry ny "lafin-javatra famokarana"?
inona no tsy itovizan'ny foto-kevitra "enti-manana" amin'ny foto-kevitry ny "lafin-javatra famokarana"? Amin'ny lafiny ankapobeny, ny loharanom-bola (avy amin'ny ressource frantsay - midika fanampiana) dia vola, sanda, tahiry, fotoana, loharanom-bola, fidiram-bola. Matetika izy ireo dia manasongadina ...
Inona ny fehintsoratra?
Inona no atao hoe fohy? Tsotra daholo izany. Ny fohy (amin'ny teny anglisy fohy) dia endrika fohy voasoratra amin'ny kaomandy fampitoniana eo amin'ny mpanao dokam-barotra sy ny mpanao dokam-barotra, izay mamaritra ny masontsivana lehibe amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny ho avy. Taratasy fohy (alemà) zavatra toy ny ...
Ohatrinona ny dolara niparitaka tamin'ny taona 20 taloha? Azonao atao ny manoratra ho isan-jato na manazava amin'ny fomba hafa.
Ohatrinona ny fisondrotan'ny dolara tao anatin'izay 20 taona lasa izay? Afaka manoratra isan-jato na manazava azy amin'ny fomba hafa ianao. Ny fiakaran'ny vidim-piainana dia tsy misy na inona na inona raha oharina amin'ny fihenan-danja. Ny fahafantarana ny devaluation dia fihenan'ny fahefa-mividin'ny "greenback" ...
ireo singa fototra amin'ny toekarena samihafa. ny tombontsoa sy ny tsy fitoviany ???
ny tena mampiavaka ny toekarena mifangaro. ny tombony sy ny fatiantoka ??? Fanampiny 1: Ny tombony lehibe amin'ny toekarena mifangaro dia fitambaran'ny karazana rafitra toekarena telo (nentim-paharazana, afovoany, tsena) 2 plus: Fananana manokana toy izany ...
Inona no atao hoe monetarisina?
inona ny atao hoe monetisation? Tsy misy izany teny izany. Misy ny "monetisation". Fanoloana tombony amin'ny vola amin'ny vola. tombony soloina vola Ny teny monetization dia efa voarakitra ao amin'ny rakibolana tsipelina. Hitako tao amin'ny tranokala ity fanazavana ity http://www.newslab.ru/blog/153095: Ary ahoana ...
Manana olana aho. Tsy azoko ny dikan'ny fihenam-bidy? Azafady, raha afaka manao ohatra ianao.
Manana olana aho. Tsy azoko hoe inona no atao hoe «amortisation»? Azafady, raha azonao atao ohatra. Raha ny fahazoako azy dia ny fandaniam-bola ny vola lany amin'ny famokarana, isan-jaton'ny vola miditra, ...
Toe-karena. Fanampiana azafady, azafady mba hanomeza ohatra momba ny tsy fanomezana vola sy ny fangatahana mialoha. Misaotra
Toe-karena. Azafady mba ampio aho hanome ohatra momba ny anton-javatra tsy misy vidin'ny tolotra sy ny fangatahana isaorana mialoha fa tsy ny vidin'ny famatsiana sy ny fangatahana - ireo dia mety ho serivisy maika amin'ny toe-javatra sarotra (asa soa, fanampiana mahaolona), sns.
Firy satos ao anaty bitcoin?
Firy ny satoshi ao anatin'ny bitcoin iray? Faucet azo antoka hatramin'ny 1000 ka hatramin'ny 3000 Satoshi isaky ny 10 minitra https://satoshinow.com/?ref=145535 Ny karama tsara indrindra ho an'ny Satoshi sy vola crypto hafa, faucet marobe https://yobit.net/?bonus=EhArY faucet tena izy . ...
Manampy, azafady, mifidiana ohatra ho an'ny fomba sasany, izay ampiasaina amin'ny fomba teoria ara-toekarena ao anatiny
Azafady mba ampio aho hahita ohatra sasany amin'ny fomba to-rye izay ampiasaina amin'ny fomba teôria ara-toekarena ao anatin'ny Synthesis. Izy io dia ampiasaina miaraka amin'ny famakafakana, izany hoe, fanesorana ara-tsaina mialoha ny zavatra dinihina amin'ny faritra misy azy, ...
Inona no atao hoe monopsony?
Inona ny atao hoe Monopsony? Monopsony dia karazana tsena iray izay mpividy ny vokatra, serivisy na loharano iray ihany no miasa. Amin'ny ankapobeny, toe-javatra iray izay monopolista ny orinasa amin'ny tsena, izay ...
Tanisao ny vola miditra sy ny fandanian'ny teti-bola.
Tanisao ireo entana miditra sy mivoaka amin'ny tetibolam-panjakana. Nankany amin'ny oniversite iray izahay, - manoratra tsy tadidiko aho - mifanaraka amin'ny andininy faha-49 amin'ny fehezan-dalàna momba ny teti-bolan'ny federasiona rosiana 1, ny vola miditra amin'ny hetra amin'ny tetibola federaly dia: - federaly ...
Inona no orinasa MICRO-MEDIA?
Inona ny orinasa MICROSE? Ny tontolon'ny orinasa manerantany dia ny fepetra anatiny sy eo noho eo, ny anton-javatra ary ny fahaizan'ny orinasa mamaritra ny asany. Ny antony lehibe ananan'ny MP dia - ny firafitry ny orinasa; mpamatsy; mpanelanelana; clientele; mpifaninana; ...
Vola sy vola ary vola be. Fischer's formula
Famatsiana vola sy vola mitambatra. Fomban'i Fisher Famaritana iray mamaritra ny fifandanjana eo amin'ny habetsaky ny vola mivezivezy sy ny hafainganan'ny fivezivezena, amin'ny lafiny iray, sy ny haavon'ny vidiny ary ny habetsahan'ny fifanakalozana - ...
Iza no manao vola amin'ny Forex? ? Tena marina ve izany ??
iza no mahazo vola amin'ny forex? ? tena izy ve ?? tena misy izy io, na dia misy aza safidy ara-barotra amin'ny Internet tsara kokoa. Soraty. Ao amin'ny kaonty virtoaly - fampiofanana - ho voasarika miaraka amin'ny voditongotra ankavia eo amin'ny efijery fanaraha-maso ianao - ...
Inona ny toerana eto Rosia manerana izao tontolo izao amin'ny solika sy ny angovo sy ny famokarana?
toerana aiza no misy an'i Russia manerantany momba ny tahiry sy famokarana solika sy gazy? Raha ny loharanom-baovao ofisialy rosiana dia manana mihoatra ny 10% amin'ny tahiry solika manerantany i Russia, laharana faha-2 manerantany amin'ny resaka ...
Inona no fanokanana?
Inona no atao hoe fitokanana? lanonana fitokanana ny fitokanana ny loham-pirenena. Ny fampitahana azy amin'ny endrika fitondram-panjakan'andriana dia ny fanamasinana. Ny fitokanana dia karazana tandindon'ny fanjakana, natao hanasongadinana ny maha-zava-dehibe sy ny andraikitry ny biraom-panjakana avo indrindra. ...
Azafady soraty ary hazavao amiko ny fitsipika momba ny fikajiana ny endriky ny vidin'ny mpanjifa sy ny fanondranana ny harin-karena faobe
Azafady soraty sy hazavao amiko ny raikipohy amin'ny fikajiana ny mari-pahaizana momba ny vidin'ny mpanjifa sy ny deflator ny harinkarena faobe. Tsara kokoa amin'ny endrika nitarina, ny Index Index ny vidin'ny mpanjifa dia mampiseho ny fiovan'ny haavon'ny vidin'ny "harona" entana sy serivisy, mazàna laniana ...
Inona ny COKE COAL ary inona io?
Inona ny COKE COAL ary inona no miaraka aminy? Ny arintany dia an'ny herin'ny herinaratra, ary izay rehetra angovo dia manampy amin'ny fivelaran'ny firenena tsirairay. Na fanafarana izany na fanondranana .. Coke - ...
ny fampandrosoana iraisam-pirenena ary ny fanavaozana ny inona ny fahasamihafana?
internationalisation and transnationalization inona ny mahasamihafa azy? Ny fanatontoloana sy ny fifandimbiasam-pahefana dia fironana lehibe amin'ny fampandrosoana ny toekarena manerantany. Misy famaritana isan-karazany amin'ilay teny hoe "internationalisation". Ny fanatontoloana dia dingana iray amin'ny fidirana lalina kokoa amin'ny asa iraisam-pirenena. ...
Inona avy ireo vola mitambatra? M1, М2, М3
Inona avy ireo vola mitambatra M1, M2, M3. Mamorona vola mitambatra M1, M2, M3 avy amin'ny angona azo. Famatsiam-bola amin'ny kaonty amin'izao fotoana izao ao amin'ny banky 800 unit Manamarina singa 120 Vola vy 100 singa Kely ...
49 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,256.